News - Ntọhapụ zuru ezu nke ịhazigharị ọdịiche, ike zuru ezu budata nke ọma
Nhapụ zuru ezu nke nhazigharị ọdịiche, ike zuru oke budata nke ọma
N'ime ụlọ ọrụ Tangshan nnukwu eletriki eletriki eletrik, ụlọ ọrụ mmemme ahụ na-ebigbọ, usoro mmepụta ọrụ zuru oke. N’ebe a na-eme mmiri mmiri, tupu etiti udu mmiri, ndị na-arụ ọrụ n’obere aka wee na-agba ọsụsọ na-ewe iwe, na-arụ ọrụ karịa oge iji nye iwu. N'èzí ụlọ nkwakọba ihe, njikọ nnyefe ahụ na-arụsi ọrụ ike ma na-edozi. Dika enwere ike hu akara BBMG n’ebe nile n’ime ulo oru ihe eji eme ihe, omenaala BBMG ya na omenaala ndi n’aruru oru dika ndi bu ihe etinyebere n’ime obi onye oru obula.
N'oge ahụ, BBMG zọpụtara nnukwu ụlọ ọrụ eletriki elektrọniki elektrọniki dị nso na enweghị ego. N'ime afọ anọ gara aga nke ịhazigharị, BBMG enyela nnukwu ụlọ ọrụ eletriki eletriki eletrik nnukwu nkwado n'ihe gbasara ego, ụlọ ọrụ otu aka, na mkpebi nke nsogbu fọdụrụ site n'akụkọ ihe mere eme, na-eme ka ụlọ ọrụ inspek eletrik eletrik dị elu tinye ọkụ. agha, na-achọpụta ọmarịcha ntụgharị site na enweghị ego na ịbawanye uru.
Aha ọma nke BBMG Group, mmetụta nke ụdị ụlọ na nke mba na ike zuru oke nke ọtụtụ narị ijeri ego emeela ka nnukwu ụlọ ọrụ eletrik eletrik eletrik nke nnukwu ezinụlọ nke BBMG Group nwetaghachi ndị ahịa mgbe afọ isii nke ịgbachi nkịtị gasịrị ahịa nke ogologo post poselin insulators. Ntụkwasị obi nke ụlọ ọrụ na-ahụ nke ọma site na Steeti Grid ahịa nwere nnukwu ihe mgbochi na nnukwu ihe achọrọ maka aha ụlọ ọrụ na ogo ngwaahịa. Na February 2018, nnukwu ụlọ ọrụ eletriki eletriki eletrik na-enweta mmeri maka State Grid Direct Recrutering Zhangbei Flexible DC Project, nke mbụ ụlọ ọrụ ngosipụta ụlọ. The State Grid Pass na-anọchi anya nnukwu ụlọ ọrụ eletriki eletriki eletrik na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ kọlụm kwụ ọtọ. N'ime oru 2022 Winter Olympics na-agbanwe agbanwe na DC, oriri nke ụlọ ọrụ eletrik eletrik eletrik dị elu ruru 50%. Kemgbe e guzobere ụlọ ọrụ nrụpụta eletriki eletrik dị elu, Grid Grid meriri ọkwa ọhụrụ dị elu. Grid steeti chịkọtara na mbụ na ụlọ ọrụ ahụ, ọnụ ahịa ahịa wee mụbaa site na 102% kwa afọ. Electric poselin insulator Company maliteghachiri ogidi seramiiki insulator ahịa na-akwụsịtụ kemgbe ọtụtụ afọ, na ya ahịa revenue mụbara site 70% afọ na-afọ. N’ọnwa Ọktọba 2019, ụlọ ọrụ insulator eletrik eletrik dị elu eweghachila ndị ahịa niile n’ahịa atọ kachasị nke ahịa ahịa mba, ahịa mgbanwe, na ahịa mba ọzọ.
The reorganized elu voltaji electric poselin insulator ụlọ ọrụ, iji melite ogo nke arụmọrụ na mma ahịa asọmpi, ike management mgbalị na mbenata-akwụ ụgwọ ma na-amụba arụmọrụ. N'ime usoro imepụta ihe, bulie ọnụọgụ ọkụ nke kiln, belata oge ịgba ọkụ ma belata oriri gas; na mmepe nke ngwa igwe, dochie igwe anaghị edozi ya na ihe aluminom iji belata onu ahia. Ka ọ dị ugbu a, nde atọ a na-etinye n'ahịa a na-etinye n'ahịa dị mma iji nwee ihe ọghọm efu. Ka ọ dị ugbu a, ikike mmepụta nke nnukwu ụlọ ọrụ eletriki eletriki eletriki eletrik dị elu nke abụọ na mba ahụ, usoro mmepụta ahụ nọ n'ọkwá na-eduga na ụlọ ọrụ ahụ, ogo ngwaahịa dị na atọ kachasị elu na mba ahụ, yana asọmpi ahịa na akara ahịa. mmetụta na-aga n'ihu na-abawanye.
Post oge: Jul-10-2020